ပါကစ္စတန်နိုင်ငံတွင် ရောဂါစိုးရိမ်မှုများကြားမှ သွေးလွန်တုပ်ကွေးရောဂါဖြစ်ပွားမှုများ မြင့်တက်နေ - Xinhua News Agency
ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံက COVID-19 ရောဂါတိုက်ဖျက်ရေး လူဦးရေ ၇၅ ရာခိုင်နှုန်းအား ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံထား
ပါကစ္စတန်နိုင်ငံ အနောက်မြောက်ပိုင်း ပက်ရှ်ဝါမြို့တွင် COVID-19 ကပ်ရောဂါဖြစ်ပွားအတွင်း လူနေရပ်ကွက်တစ်ခုကို ပိုးသတ်ဆေးဖျန်းနေသူတစ်ဦးအား တွေ့ရစဉ် (ဆင်ဟွာ)
အစ္စလာမ်မာဘတ်၊ စက်တင်ဘာ ၂၇ ရက် (ဆင်ဟွာ)
ပါကစ္စတန်နိုင်ငံတွင် လာမည့်ရက်များအတွင်း ရောဂါဖြစ်ပွားမှုနှင့် ရင်ဆိုင်ရဖွယ်ရှိကြောင်း စိုးရိမ်မှုများကြားမှ လွန်ခဲ့သည့် ၂၄ နာရီအတွင်း နိုင်ငံအတွင်းရှိ ဒေသအတော်များများ၌ သွေးလွန်တုပ်ကွေးရောဂါဖြစ်ပွားမှု အရေအတွက် မြင့်တက်လာခဲ့ကြောင်း ကျန်းမာရေးအာဏာပိုင်များက စက်တင်ဘာ ၂၆ ရက်တွင် ပြောကြားခဲ့သည်။
နိုင်ငံအရှေ့ပိုင်း ပန်ဂျပ်ပြည်နယ်တစ်ဝန်း လွန်ခဲ့သည့် ၂၄ နာရီအတွင်း သွေးလွန်တုပ်ကွေးရောဂါဖြစ်ပွားမှုအသစ် စုစုပေါင်း ၉၀ ဦးရှိခဲ့ကြောင်း၊ ရောဂါဖြစ်ပွားသူအများစုမှာ ပန်ဂျပ်ပြည်နယ် မြို့တော် လာဟိုးမှဖြစ်ကြောင်း ပြည်နယ် ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနက ပြောခဲ့သည်။
၎င်းပြည်နယ်၌ ယခုနှစ်အတွင်း သွေးလွန်တုပ်ကွေးရောဂါဖြစ်ပွားမှု စုစုပေါင်းမှာ ၁,၀၈၂ ဦးရှိကြောင်း ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနက ဖော်ပြထားသည်။
အလားတူပင် ပါကစ္စတန်နိုင်ငံ အနောက်မြောက်ပိုင်း Khyber Pakhtunkhwa (KP) ပြည်နယ်၌ လွန်ခဲ့သည့်တစ်လအတွင်း သွေးလွန်တုပ်ကွေးရောဂါဖြစ်ပွားသူ ၈၀၀ ကျော်ရှိခဲ့ပြီး ပြီးခဲ့သည့် ၂၄ နာရီအတွင်းတွင်မူ ရောဂါဖြစ်ပွားသူအသစ်များစွာရှိခဲ့ကြောင်း KP ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနကအရ သိရသည်။
သွေးလွန်တုပ်ကွေးရောဂါဖြစ်ပွားမှုအသစ် မြင့်မားလာကြောင်းသတိပေးချက်အပေါ် ထိန်းသိမ်းဆောင်ရွက်ခြင်းအရ ခရိုင်အစိုးရများနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအရ ပြည်နယ် ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနသည် ပြည်နယ်အတွင်း ခြင်ဆေးဖျန်းခြင်းနှင့် အသိပညာပေးစည်းရုံးလှုံ့ဆော်မှုကို စတင်ဆောင်ရွက်နေပြီဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ထို့ပြင် လွန်ခဲ့သည့် ၂၄ နာရီအတွင်း မြို့တော် အစ္စလာမ်မာဘတ်တွင် သွေးလွန်တုပ်ကွေးဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်ခံရသူ ၃၂ ဦး ထပ်မံရှိခဲ့ရာ ယခုနှစ်၌ ရောဂါဖြစ်ပွားသူ ၁၇၇ ဦးအထိရှိလာခဲ့ကြောင်း အစ္စလာမ်မာဘတ် ခရိုင်ကျန်းမာရေးအရာရှိ Zaeem Zia က ဒေသတွင်းမီဒီယာသို့ ပြောခဲ့သည်။
အစိုးရအရာရှိများ၏အဆိုအရ COVID-19 ရောဂါကြောင့် စိန်ခေါ်မှုမျိုးစုံ ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နေရသော်ငြားလည်း ပါကစ္စတန်အစိုးရသည် တတ်စွမ်းသမျှ ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုများ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသလို သွေးလွန်တုပ်ကွေးဗိုင်းရပ်စ် ထပ်မံပျံ့နှံ့မှုကို တားဆီးရေး ပြည့်စုံသောအစီအမံများကိုလည်း လုပ်ဆောင်လျက်ရှိကြောင်း သိရသည်။ (Xinhua)
Source: Xinhua| 2021-09-26 23:49:09|Editor: huaxia
ISLAMABAD, Sept. 26 (Xinhua) — A surge in the number of dengue fever cases has been reported in parts of Pakistan over the past 24 hours amid fears that the country might face an outbreak of the disease in the coming days, heath authorities said on Sunday.
A total of 90 new cases of dengue fever have been reported across the eastern Punjab province over the past 24 hours, said the provincial health department, adding that most of the cases were recorded in Lahore, the provincial capital of Punjab.
The total tally of dengue fever cases this year has surged to 1,082 in the province, said the health department.
Similarly, more than 800 dengue fever cases were detected in the country’s northwest Khyber Pakhtunkhwa (KP) province during the last one month as the province added several new cases over the last 24 hours, said the KP health department.
Keeping in view of the alarming spike in the dengue fever cases, the province’s health department in collaboration with the district administrations has begun fumigation and an awareness campaign in the province.
Meanwhile, 32 more people were infected with the dengue virus in the federal capital Islamabad in the past 24 hours, pushing the tally of the cases in the city to 177 this year, Islamabad District Health Officer Zaeem Zia told local media.
According to government officials, despite various challenges posed by COVID-19, the Pakistani government has been making all-out efforts and taking adequate measures to stem the further spread of the dengue virus. Enditem
Photo ; A worker disinfectsaresidential area amid COVID-19 pandemic in northwest Pakistan’s Peshawar on April 23, 2020. (Photo by Saeed Ahmad/Xinhua)